Ujyaalo Sandesh | » अन्तिम क्षणमा बाजुराबाट सिकिस्त सुत्केरीको उद्दार अन्तिम क्षणमा बाजुराबाट सिकिस्त सुत्केरीको उद्दार – Ujyaalo Sandesh
अन्तिम क्षणमा बाजुराबाट सिकिस्त सुत्केरीको उद्दार
यस्तो समस्या घटाउने छ ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड योजनाले
शर्मिला रोकाया, माघ १८ (बाजुरा)
बाजुराको विकटमा रहेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नम्बर १ खोलाहाकी ३५ बर्षीया गीता बिक सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तश्रावले सिकिस्त थिइन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइएको भएपनि उनको उपचार हुन सकेन । सिकिस्त भएपछि अन्तिम क्षणमा आएर शुक्रबार उनलाई थप उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लिइएको छ ।
घरमा सुत्केरी ब्यथा लागेकी बिकलाई आफन्तले सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याएका थिए । तर रगत धेरै बगेकाले उनको उपचार सम्भव नभएपछि हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज पुर्याइएको स्थानीय सतल विकले बताए ।
प्रदेश सांसद बल्देव रेग्मी र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चीरन्जीवी शाहीको पहलमा बिकलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लिइएको हो । चौथो सन्तानका रुपमा छोरोको जन्म दिएकि ३५ बर्षीया बिकको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण आमा र छोराको ज्यान जोखिममा परेको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको महिला उत्थान विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा उनलाई हेलिकप्टरबाट लिइएको हो ।
यहाँका ग्रामिण क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरु अक्सर जोखिममा हुने गरेका छन् । नियमित स्वास्थ्य जााच नगर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा पनि आवश्यक औषधी र जाँच उपकरण अभावका कारण यस्ता महिलाहरुले समयमै उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । यही कारण कतिपयको अकालमा ज्यान नै जाने गरको छ । सुत्केरी तथा जटिल खालका विरामीलाई सुविधा सम्पन्न ठाँउमा रेफर गर्नु वाहेक विकल्प नरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
यसकारण ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड
गीताको जस्तै समस्या भोगिरहेका ग्रामिण क्षेत्रका गर्भवतीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयले ‘हरेक स्वास्थ्य चौकीमै अल्ट्रासाउण्ड’ को महत्वकांक्षी कार्यक्रम सुरु गर्न थालेको छ । त्यसका लागि यस प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीलाई उपलब्ध गराउने गरि पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड समेत खरिद गरिसकेको जनाएको छ । उक्त मेसिन चलाउनका लागि हाल विभिन्न चरणमा अनमी र स्टाफ नर्सलाई २१ दिनको तालिम चलिरहेको स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थाीले बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. मिङमार सेर्पाले तालिमको संयोजन गरिरहेका छन् ।
‘यस्तै समस्याको न्यूनिकरण गर्न हरेक स्वास्थ्य चौकीमा ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड उपलब्ध गराउने योजना ल्याइएको हो’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘गर्भवतीहरुले अब भिडियो एक्सरे गर्न सदरमुकाम वा सुविधासम्म ठाउँमा धाउनु पर्ने छैन । आफ्नै पालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्सरेमार्फत गर्भजाँच गर्न सकिने कार्यक्रम सुरु गर्नै थालेका छौ । गर्भमा रहेको शिशुको उल्टो सुल्टो अन्य जोखिमको अवस्था समयमै जानकारी पाए गर्भवतीले थप उपचार गराएर स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले त ग्रामिण क्षेत्रका गर्भवतीलाई गर्भावस्था बारे समयमै जानकारी पाउने कुनै माध्यमै नभउकोल अन्तिम क्षणमा मात्र आएर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको हो । अब यो समस्या घट्ने र गर्भवतीलाई अकालमा मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिने छ ।’